संसदीय समितिका सभापतिको घाँस बोक्ने गाडी प्रह'रीको नि'यन्त्र’णमा (तपाईं केहि भन्न चाहनुहुन्छ ?) - Public 24Khabar
Home News संसदीय समितिका सभापतिको घाँस बोक्ने गाडी प्रह’रीको नि’यन्त्र’णमा (तपाईं केहि भन्न चाहनुहुन्छ...
संसदीय समितिका सभापतिको घाँस बोक्ने गाडी प्रह’रीको नि’यन्त्र’णमा (तपाईं केहि भन्न चाहनुहुन्छ ?)
कर्णाली प्रदेशसभा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति गणेशप्रसाद सिंहकोको गाडी शनिबार दिन घाँस बोकेको भन्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । सभापति सिंह चढ्ने गाडी कर्णाली प्रदेश ०२ – ००१ झ ००४० नम्बरको उक्त गाडीले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका- ११ भेरीबाट घाँस लिएर आउँदै गर्दा सुब्बाकुनास्थित ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
शनिबारका दिन सरकारी गाडी घाँस बोकेर चलाएको देखेपछि ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । सभापति सिंहले गाडी आफ्नो छोरालाई नेपालगञ्ज विमानस्थल पुर्‍याउन गएको र आफू सुर्खेतस्थित पश्चिम बराहतालको बड्डीचौर भएको सभापति सिंहले बताए ।
‘गाडी छोरालाई पुर्‍याउन शनिबार बिहान गएको थियो । म योजना आयोगको गाडीमा बड्डीचौर आएको छु,’ उनले भने, ‘बाटोमा फर्किंदा ड्राइभरले घाँस बोकेर ल्याएको हुनसक्छ ।’ प्रदेशसभा संसदीय समितिको सभापतिको हैसियतमा सिंहलाई यातायात सुविधाका लागि गाडी प्रदान गरिएको हो । shilapatra
अर्को समचार पनि पढ्नुहोस्
अपराधी जतिसुकै बाठो, स्मार्ट, सुन्दर या चलाख हो तर एक दिन त प्रहरीको फन्दामा परिहाल्छ छ नै । यहाँ उल्लेखित तस्वीर हेर्नुहोस् । यी यस्ती शातिर चोरनी हुन् जसले मुम्बईका मल मालिकलाई परेशान गरेकी थिइन्।
मुम्बई क्राइम ब्राञ्चले एक यस्ती शातिर महिला चोरनीलाई पक्राउ गरेको छ, जो बेङ्लोरदेखि मुम्बई चोरी गर्नकै लागि फ्लाइटबाट आउने गर्थिन् । चोरी गरिसकेपछि फ्लाइटबाटै फरार हुने गर्थिन् । यी महिलाले पछिल्लो १० वर्षदेखि भारतका ४ ठूला शहरमा दर्जनौं चोरी गरेकी छन्। सबैभन्दा विशेष कुरा त महिलाको निशानामा ठूला ठूला मल, शोरुम जहाँ धेरै भीड हुन्छ । त्यही सही तरिकाले महँगा सामान चोरी गरेर फरार हुन्थिन् । यी शातिर चोर महिलाको नाम हो अर्चना बरुवा अर्थात मुनमन । ४६ वर्षीय मुनमुन आफ्नी छोरीका साथ बेङलोरमा बस्दै आएकी छिन्।
करिब १० वर्षदेखि भारतका ठूला शहरका शोरुम र ठूला मलमा चोरी गर्दै आएकी थिइन् । मुम्बई प्रहरीका अनुसार उनले तीन चोरी मुम्बई, पाँच बेङलोर, दुई हैदरावाद र एक चोरी कोलकातामा अञ्जाम दिएककी छन् । अहिलेसम्मको जाँचमा यस्तो तथ्य बाहिर आएको हो। जाँचका क्रममा अर्चनाले २०१९ मा मुम्बईको लोहर परेल इलाकामा रहेको फिनिक्स मलस्थित जाराको शोरुममा करिब २५ लाखको चोरी गरेको पाइएको छ । साथै यसै मलमा उनले २०१८ मा ७ लाख बराबरको चोरी तथा २०१८ मा दादर इलाकास्थित मलबाट करिब ६ लाख बराबरको महँगा सामान चोरी गरेर भागेकी थिइन्।
मुनमुनको विवाह बाल्यकालमै भएको थियो । राम्रो श्वर भएका कारण उनी गाउन थालिन् । मानिस उनको सुरिलो आवाजको दिवाना नै भएका थिए । आर्केस्ट्रामा कामबाट राम्रो कमाई पनि गरिरहेकी थिइन् । तर, २०१३ मा आफ्ना पतिबाट मुनमुन छुटिइन्। यसपछि उनलाई पैसा अभाव भएको महशुस भयो र उनले चोरीलाई नै आफ्नो पेशा बनाइन् । मुम्बई प्रहरीले पछिल्लो एक वर्षदेखि मुनमुनको खोजतलास गरिहेको थियो । क्राइम ब्राञ्चको टिमले बेङलोरबाट खुफिया टिमको सहयोगले पक्राउ गरेको थियो।
ब्राञ्चका प्रहरी निरीक्षक जगदीश साइलका अनुसार लामो समयदेखि ती महिलाको खोजी गरिएको थियो । उनीविरुद्ध कैयौं चोरीका उजुरी दर्ता भएका थिए । उनलाई जुन शहरमा चोरी गर्नुपथ्र्यो, त्यहाँ बिहान फ्लाइटबाट आउँथिइन् । चोरी गरीसकेपछि साँझ पुनः फ्लाइटबाटै फर्किने गर्थिन् । उनी चोरीपछि शहर पनि बदल्दै आएकी थिइन्। यसैकारण प्रहरीलाई उनीसम्म पुग्न १० वर्ष लाग्यो । उनी जब चोरीका लागि कतै जान्थिइन्, त्यहाँ पूरै सजिएर धनि मानिसजस्तै देखिने गर्थिन् । त्यसपछि शोरुममा रहेका कर्मचारीसँग घुममिल हुने र कैयौं मूल्यवान वस्तु देखाउन भन्थिन् । कर्मचारीको नजर जब अन्य ग्राहकमाथि हुन्थ्यो।
त्यसबेला नै उनी महँगा वस्तु उठाउँथिन् । मल या शोरुममा राखिएका सीसीटिभी क्यामेरको नजरमा नआउने भरपूर कोशिस गर्थिन् । यसकारण उनी आफुनो अनुहार भुइँतिर राख्ने तथा कयौंपटक फोन कलमा व्यस्त हुन्थीइन् । ताकि क्यामेरामा अनुहार नदेखियोस भनेर । प्रहरीले यी महिलालाई पक्राउ गर्न निकै मिहेनत गरेको छ। प्रहरीले जानकारी जुटाउनका लागि मल र शोरुम आसपासमा गरिएका कैयौं कल डिटेल्स जाँच गरेको थियो। सबै तथ्यांक विश्लेषण गरियो । तस्वीरलाई सामाजिक सञ्जालमा खोजी गरियो । अलग अलग नामबाट नम्बर पाइए जो शंकाको घेरामा थिए । फेरि ती नम्बरलाई ट्रयाक गरेपछि बेङलोरको लोकेशन भेटियो।
प्रहरीका अनुसार २००८ मा उनले पहिलो चोरी बेङलोरमै गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनलाई चोरी गर्ने बानी नै बस्यो।
Previous articleअचानक चीनको यस्तो निर्णय, केरुङ काठमाडौं रेलमार्ग बारे नेपाललाई पठायो यस्तो सन्देश China Nepal
Next articleविश्वकै लामो यात्रु वाहक केबलकार निर्माण गर्दै नेपाल, डिपिआर अनुसार यस्ता छन् सुविधा